Itoobiya: Jidka Isku-xidha Addis Ababa Iyo Bariga Dalka Oo Go'an, Gadood Lagu Taageerayo Jawhar Maxamed Oo Socda Iyo Booliska Dalka Oo Hadlay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya: Jidka Isku-xidha Addis Ababa Iyo Bariga Dalka Oo Go’an, Gadood Lagu Taageerayo Jawhar Maxamed Oo Socda Iyo Booliska Dalka Oo Hadlay
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Mudaharaadyo ayaa ka socda deegaamada Oromada ee dalka Itoobiya, kuwaas oo sababay inuu xannibmo isku-socodka dalka, gaar ahaan Addis Ababa iyo qaybaha bariga, kaddib markii ay dhallinyaro gadoodsan jareen jidadka muhiimka ah ee dalka isku-xidha.
Rabashadan ayaa abuurmay xalay gellinkii dambe, inyar kaddib markii uu halgamaaga Oromada ee Jawhar Maxamed uu soo duubay muuqaal uu ku sheegayo in dawladda Federaalku ay u diyaarisay mu’aamarad, ayna amartay ciidamadii ilaalinayey inay saq-dhexe alaabtooda kasoo guuraan.
Dadka mudaharaadaya oo qaarkood ay gubeen sawirrada Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed, ayaa waxay isku xeereen guriga uu deggan yahay Jawhar Maxamed, si ay u sugaan ammaankiisa.
Komishaneerka Federaalka Booliska oo mar dhoweyd shir jaraa’id ku qabtay Addis Ababa ayaa sheegay in warka uu xalay baahiyey Jawhar Maxamed uu yahay been abuur oo aanay dawladdu isku dayin fal isaga ka dhan ah, waxaana uu ka codsaday dhallinyarada inay jidadka banneeyaan si isku-socodka shacabku dib ugu soo laabto.
Komishaneerku waxa kale oo uu sheegay in ay dawladda ka go’an tahay ilaalinta sarraynta sharciga, taas oo ka dhigan in digniin maldahan uu u jeedinayo dadka jidadka xidhay.
Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalin kaddib markii uu Jawhar Maxamed si adag uga hor yimid qorshaha Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ee Medemer, halka ay sidoo kalena noqonayso maalin kaddib markii uu Dr. Abiy dalka ka dhoofay, isagoo ka qayb-gelaya shirka Iskaashiga Ruushka iyo Afrikaanka ee ka socda magaalada Moscow.